နေ့များ: November 2010
ဥရောပပေါင်းစည်းရေးအတွက်စဉ်းစားလာရသည့်အချက်တချက်မှာ ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးစံနစ်၏ နိုင်ငံတခုချင်းပေါ်သို့ရိုက်ခတ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျဆိုရလျှင် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးပြီးနည်းပညာ ရှေ့တန်းရောက်နေသည့်စက်မှုနိုင်ငံကြီးများတွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးဘက်တွင် ပေးဆပ်ရတတ်သည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဒါတွေက အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းများလာခြင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု နှင့် ၀င်ငွေမညီမျှမှုတို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအချက်များကလူမှုပေါင်းစည်းရေးကိုပြေလျှော့စေသည်။ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုထိပါးစေသည်။ လူမှုဖူလုံရေးစံနစ်၊ အလုပ်သမားဈေးကွက်ကိုအလျှော့ အတင်းပြုခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရေးပေါ်လစီ တို့ဖြင့်အထက်ကဆိုခဲ့သည့်အကျပ်အတည်းများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
သို့သော် ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေး နှင့် ငွေကြေးဈေးကွက်တို့က စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု၏ဘေးထွက်ပြဿနာများကို လူမှုဖူလုံရေးစံနစ်ဖြင့်ထိမ်းကျောင်းနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်လာစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးနှင့် အတူပေါ်ပေါက်လာသော နိုင်ငံစုံကော်ပိုးရေးရှင်းကြီးများကသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်နိုင်ငံတွင် အလုပ်သမား ဈေးကွက်ကိုဥပဒေများသုံးပြီးထိမ်းချုပ်လာပါက အခြားလုပ်အားဈေးချို ပြီးကန့်သတ်မှုနဲသည့်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွေ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေလိမ့်မည်။ ဒီခြိမ်းခြောက်မှုကနိုင်ငံများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစီးဝင်လာရန်၊ ၀င်လာပြီးသားမြှုပ်နှံမှုများပြန်ထွက်မသွားစေရန် ထိုလုပ်ငန်းများအရင်းအနှီးများအတွက်အခွန်အကောက်နှုန်းများ ကိုတိုးမြှင့်ကောက်ခံရန်မလွယ်ကူပေ။ တဘက်တွင်လည်းလူမှုဖူလုံရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကလည်းရှိပြန်သည်။ အခွန်ငွေတိုးချဲ့ကောက်ခံဖို့ကလည်းအမြဲလိုကျားမြီးဆွဲရသလိုဖြစ်နေသည့်အတွက် အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားလည်ပတ်စေမည့် ဘတ်ဂျက်လိုငွေကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲလာပေသည်။
ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရန် ဟာဘားမားကဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုတင်ပြထားသည်။ ပထမတချက်က အသုံးစရိတ် တွေကိုလျှော့ချ၊ လေဘာမားကက်ကိုဖွင့်ပေးထား၊ သို့သော်လူမှုဖူလုံရေးကိုမလုပ်နှင့်တော့။ ဖျားမယ်နာမယ်ဆို ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ကု၊ ဆေးရုံတက်လို့ကတော့စုထားတာလေးတွေထုတ်သုံးပေတော့။ ဆိုလိုတာကနိုင်ငံသား တွေစီးပွားရေးဘက်ကအသာရထားသမျှ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရပေတော့မည်။ ဒါကနီယိုလစ်ဘရယ်နည်း၊ ဟာဘားမားသိပ်သဘောတွေ့ပုံမပေါ်။ နောက်တနည်းက နိုင်ငံရေးကိုပါ ကမ္ဘာလုံးဇတ်သွင်းဖို့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပတ်နေသည့် လက်ရှိဂလိုဘယ်စီးပွားရေးကိုနှင်တံလေးနှင့် မောင်းဖို့ဖြစ်သည်။ ဒီအယူအဆကိုအားလုံးကမျက်ခုံးပင့်ပြီးကြည့်ကြသည်။ ဟုတ်ပါ့မလားမောင်ကာလုရဲ့ဆိုသည့်မျက်နှာပေးတွေနဲ့။ ဟာဘားမားကတော့အောင်မြင်မည်မဆို။ စမ်းကြည့်ရမည်တဲ့။ ခုကိုပဲစတင်နေပါပြီ။ ဥရောပယူနီယံဖြစ်သည်။ ဟာဘားမားကတော့ ဒါကပုံစံပြောင်းတာမဟုတ်။ တိုးချဲ့နေခြင်းလို့ဆိုသည်။ စံနစ်တခုကနေ၊ ပုံစံတခုကနေ တခြားတခုကို ကူးပြောင်းနေတာမဟုတ်။ ပုံစံတူကိုတိုးချဲ့နေခြင်းဟုဆိုသည်။ ဒေသမတူ၊ ဘာသာစကားမတူ၊ ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံမတူသည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံး ဥရောပသမဂ္ဂဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်တခုတည်း အောက်တွင်မည်သို့စုစည်းကြမည်နည်း။ ဒါလည်းပဲ မေးစရာကောင်းသည့်အချက်တခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရောပြွန်းလာပြီး လူများရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နိုင်စွမ်းအားမြင့်လာသည့် အတွက်ရေရှည်တွင်လည်းနိုင်ငံဆိုသည့်စည်းတခုတားပြီး အထီးတည်းနေဖို့မလွယ်တော့ပါဟု ဟာဘားမားကထောက်ပြထားသည်။ ယဉ်ကျေးမှုများအပြန်အလှန်လေ့လာခြင်း၊ ခရီးသွားလာမှုများလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ တက္ကသိုလ်များတွင်ကူးပြောင်းပရိုဂရမ်များထဲ့သွင်းခြင်း တို့သည်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်း ကောင်းမွန်သောနားလည်ယုံကြည်မှုကိုရေရှည်တွင်ပေးပေလိမ့်မည်။ ဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်အစောပိုင်းကာလများတွင် ဒေသသတ်မှတ်ချက်အရနိုင်ငံပုံစံယှဉ်ပြိုင်မှုများရှိ နေပေဦးမည်။ သို့သော်တချိန်တွင်ယူနီယံအဆင့်ထိနားလည်တိုးမြှင့်ခံစားလာနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ ဒီပုံစံကသင်ခန်းစာနှင့်အတွေ့အကြုံများသည် ကော်စမိုပေါ်လီတန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးထဲကိုဝင်ရောက်လာ နိုင်ပေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသွားမည့်ပန်းတိုင်မှာ ကမ္ဘာဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့် သူ့ကိုတည့်မတ်မည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်သည်။
ဒါက ကမ္ဘာသားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးပုံစံဖြစ်ပြီး အားလုံးကြိုးစားရမည့် ဖြစ်စဉ်တခုလို့လည်းဆိုသည်။ အားလုံးဆက်လက်စမ်းသတ်သွားရမည့်နည်းလမ်းလို့လဲဆိုသည်။ ဘာလို့လဲ၊ အခြားနည်းတွေကပိုဆိုးမည့်အကျိုးဆက်တွေကိုတွေ့နေရလို့ပဲဖြစ်သည်။ အရင်းရှင်စံနစ်ကိုဇက်ကြိုးဖြည်ပြီး လွှတ်ပေးလိုက်လို့မဖြစ်။ စမ်းသတ်ချက်သေချာပေါက်အောင်မြင်မည်မဆိုနိုင်၊ သို့သော် မဖြစ်နိုင်သောကိစ္စလည်းမဟုတ်။ ဒီမိုကရက်တစ်စံနှုန်းများအရ လွတ်လပ်ပြီးညီမျှသည့်နိုင်ငံသားတွေစုပေါင်းပြီး သူတို့လူမှုကမ္ဘာကိုပုံဖော်နိုင်စွမ်းသည် အခွင့်အရေးကိုဘာလို့လက်လွှတ်ခံမည်နည်း။ ဟာဘားမားကတော့ အားလုံးမလွတ်မြောက်မချင်းမည်သူမျှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်မဟုတ် ဟုဆိုသည်။
HABERMAS (a very short introduction) by James Gordon Finlayson 2005, Oxford
Fifty Major Political Thinkers (Second Edition, 2007) by Ian Adams and R.W. Dyson, Routledge
Posted by KZကေ at 16:38 No comments:
Labels: Political Thinkers
၁၅။ ဘာလင်တံတိုင်းအပြို နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးရစ်သမ်
ကိုလူ။ ။ အမျိုးသားရေးဝါဒကဂျာမာန်မှာတော်တော်မွှေနေလို့ ဟာဘားမားကဒါကိုအရေးတကြီး ပြောရတာလား။
ကိုမူ။ ။ ခင်ဗျားလည်းသိပါတယ်။ ဟစ်တလာကအာရိယာန်သွေးဆိုပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒကနေ ဖက်စစ်စံနစ်ကိုကူးခဲ့တယ်။ အော့ဇ၀စ် လိုငရဲခန်းတွေထဲမှာ ဂျုး၆သန်းကိုရှင်းခဲ့တယ်၊ ဂျာမာန်တွေဟာ စစ်ကြီးနှစ်ခုစလုံးရှုံးခဲ့တယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ဆိုဗီယက်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ ဂျာမနီ ကိုခွဲစိတ်ပြီး သူတို့စိတ်ကြိုက် အစိုးရနဲ့အယူဝါဒတွေသွတ်သွင်းခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဘာလင်တံတိုင်းအပြိုမှာ စစ်အေးနိဂုံးဆိုတဲ့ သမိုင်းတကွေ့ကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။
ကိုလူ။ ။ ဂျာမာန်ပေါင်းစည်းရေးအကြောင်းလည်းပြောပါဦးဗျ
ကိုမူ။ ။ နိုဝင်ဘာ၉. ၁၉၈၉ မှာ ဂျာမာန်အရှေ့နဲ့အနောက် နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းကြတယ်။ GDR (German Democratic Republic) အရှေ့ဂျာမနီ ပြိုကျသွားတယ်။ ဟာဘားမားဟာအဲဒီအချိန်ကပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကြံပြုခဲ့တယ်။
ကိုလူ။ ။ အဲဒီအချိန်က ချန်ဆယ်လာက ဟဲလမွတ်ခိုး မဟုတ်လားဗျ။
ကိုမူ။ ။ အင်း။ သူနဲ့သူ့လူတွေကဂျာမာန်ပေါင်းစည်းရေးကို ကြားခံဥပဒေနဲ့အဆင့်တွေမခံပဲ တိုက်ရိုက်သွားဖို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကပ်ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူထုထောက်ခံမှုကောင်းဖို့ ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကြောင့်ဆိုပဲ။
ကိုလူ။ ။ အဲဒါဘာများမှားသွားသလဲ။ ခုလည်း ဂျာမနီဟာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲမလား။
ကိုမူ။ ။ ဟာဘားမားအမြင်ကတော့ အချိန်သာပိုယူခဲ့ရင်အရှေ့ဂျာမနီသားတွေဟာ အနောက်က ဗျုရိုကရက်တွေခင်းပေးတဲ့အယူအဆ၊ လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားစရာမလိုပဲ သူတို့လည်း ပေါင်းစည်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ တစုံတရာထဲ့ဝင်နိုင်မယ်။ လုံလောက်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်နဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သဘောညီမှုတွေအားနည်းခဲ့ရတယ်ဆိုပဲ။ ပိုဆိုးတာက အရှေ့ဂျာမနီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံဟောင်းကို ဖျက်ပြီး သူနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအင်စတီကျုးရှင်းတွေအားလုံးကိုပါချုပ်ငြိမ်းစေတာဟာ မှားတယ်ဆိုတယ်။
ကိုလူ။ ။ အရှေ့ရဲ့အာဏာရှင်ပုံစံကိုမကြိုက်လို့ဖျက်ပြီးအနောက်နဲ့ပေါင်းပါတယ်ဆိုမှ ဘာကိုသံယောဇဉ်တွယ်နေရဦးမလဲဗျ၊
ကိုမူ။ ။ သူတို့ဖျက်သိမ်းခဲ့တာတွေထဲမှာ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းလည်းပါတာကိုး။ ဒါကိုဟာဘားမား ကကြိုက်ပုံမရဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးနှစ်ခုထဲပဲကြည့်ပြီးပေါင်းစည်းရေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံရေးအရကိုပေါင်းနိုင်မှ ပီပြင်တဲ့ပေါင်းစည်းရေးဖြစ်လာမှာ။ အရှေ့ဂျာမာန်တွေကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင်ပြန်စရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်နားလည်သိမြင်မှု အချိန်တခုတော့ပေးရမယ်။
ကိုလူ။ ။ တချို့ကတော့ခုလိုစာရွက်ပေါ်ကစီမံကိန်းတွေမကြည့်ပဲလက်တွေ့ဖော်ဆောင်လိုက်တာကိုပဲ အမှတ်ပေးကြတယ်နော်။
ကိုမူ။ ။ ဒါပေမဲ့ဟာဘားမားသံသယရှိတဲ့နောက်တချက်က ဂျာမနီဟာ ပန်ဂျာမန်အမျိုးသားရေးအခြေခံစိတ်ဓါတ် (Pan-German Nationalist Sentiment) နဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းအရှေ့ဂျာမန်မှာတခြားကလာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုဂျာမန်လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တွေက နှောင့်ယှက်ခဲ့တာတွေဟာ ဒီအကျိုးဆက်လို့ သူသုံးသပ်တယ်။
ကိုလူ။ ။ ဘာလဲဗျ ပန်ဂျာမန် ဆိုတာ။
ကိုမူ။ ။ ဂျာမန်စကားပြောသူတွေအားလုံးပေါင်းစည်းရေးပဲ။ ဥရောပအလယ်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ ပြောရရင် ဒတ်ခ်ျတွေနဲ့ ဖလင်းမစ်ခ်ျ တွေကလည်းမူရင်းဂျာမန်စကားရဲ့ဒေသသုံးတွေလို့ဆိုတယ်။
ကိုလူ။ ။ ဖလင်းမစ်ခ်ျကဘယ်လ်ဂျီယံမှာပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးလား။
ကိုမူ။ ။ ဟုတ်တယ် ဘယ်လ်ဂျီယံသားတွေအဓိကပြောတာ ပြင်သစ်နဲ့ဖလင်းမစ်ခ်ျ ပေါ့။ ဘရပ်ဆဲမှာရေဒီယိုမှာနှစ်ဘာသာနဲ့အဓိကလွှင့်ပြီး တမြို့ထဲနေပြီး နာမည်ကြီးပြင်သစ်အဆိုတော်နာမည်ကို ဖလင်းမစ်ခ်ျ ပြောတဲ့သူတွေကမသိကြဘူးလို့ ကျနော်တခါကဖတ်လိုက်ရတယ်။ ပန်ဂျာမန်ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နပိုလီယံရဲ့အင်အားချဲ့ထွင်မှုကိုတားဖို့ပါပဲ။
ကိုလူ။ ။ အော် ဥရောပသမဂ္ဂရုံးစိုက်တဲ့ မြို့တော်မှာ ဘာသာစကားနှစ်ခုနဲ့ကပ်ညိနေတဲ့ဆရာများက ဥရောပယူနီယံကိုဘယ်လိုများ ထူထောင်ကြမလဲဗျာ။
ကိုမူ။ ။ အဲဒါလေ ခင်ဗျားသိချင်နေတဲ့ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပြောမဲ့ဟာပေါ့။ ဥရောပပေါင်းစည်းရေးနဲ့ ဟာဘားမားရဲ့ပို့စ်နေရှင်နယ်လစ် အယူအဆ။
ကိုလူ။ ။ မြန်မြန်သာပြီးပါမှပဲကိုယ့်ဆရာရေ။ ဒါပြတ်ပါမှပဲကျနော်လည်းရွာပြန်ပြီး သာဂိတို့ထန်းတောမှာ မနက်စောစော နှစ်မြူလောက်သွားဆွဲပြီး မိန်းမချောမှတ်မိလေမလားကွယ် ကန်ပတ်လည်ခရေပွင့် ရွာထိပ်ကကျောင်းတော်သာနဘေး ……. ဆိုပြီးအကျယ်ကြီးဟဲလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
Posted by KZကေ at 22:31 No comments:
၁၄။ အမျိုးသားရေးဝါဒကိုလက်သပ်မွေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကျောမှာဒါဏ်ရာတွေနဲ့
ကိုလူ။ ။ အင်း လူမှုအစီအစဉ် တခုတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာလည်းဘက်ပေါင်းစုံကကြည့်ရတာကလား။ ခင်ဗျားနောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုတဲ့ Post-national Citizenship ဆိုတာလေးဆက်ပါဦး။
ကိုမူ။ ။ ဆက်တာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒ (Nationalism) ကိုအရင်စကြည့်ရအောင်။ မော်ဒန်ခေတ်ဦးလူ့အဖွဲ့အစည်းပုံစံဟာ ဒေသ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုနဲ့ မြေရှင်စံနစ်ရဲ့အရိပ်အောက်မှာရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၈ရာစုအကုန်ပိုင်းလောက် ကစပြီး ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာ အဲဒီအချိန်မှာရှိတဲ့လူမှုပြဿနာပေါင်းစုံကိုဖြေရှင်း ရင်းပုံစံကွဲလာခဲ့တယ်။ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုစတယ်၊ လူတွေကုန်တွေ လှုပ်ရှားစီးဆင်းလာတယ်၊ ဘာသာရေးအစွဲအလမ်းနဲလာတယ်။
ကိုလူ။ ။ ဒီရွာလေးမှာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဓါးမဦးချ နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်သူတွေ၊ ကိုယ့်ဘေးအိမ်မှာမရှိတော့ဘူး၊ လူစိမ်းတွေရောက်လာတယ်။ ဘာသာစကားအရ ယဉ်ကျေးမှုအရ အစဉ်အလာထုံးဖွဲ့မှုတူညီပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကွန်မြူနတီတွေဟာ မျှခြေယိုင်လာတယ်ပေါ့။
ကိုမူ။ ။ ဒီတော့ဗျာ လူမှုပေါင်းစည်းရေးကအရင်ထက်ပိုအရေးပါလာတယ်။ နိုင်ငံသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ ဆက်ထုံးတွေကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ဖို့လိုလာတယ်။ နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားသိစိတ် (National Consciousness) နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်ထဲထူထောင်ဖို့ စုပေါင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာ (Collective cultural and political Identity) ကိုခံစားတတ်ဖို့လိုလာတယ်။
ကိုလူ။ ။ အဲဒီခံစားမှုဟာအစွန်းရောက်လွန်ကဲလာရင် အမျိုးသားရေးဝါဒ ထောင်ချောက်ထဲဝင်သွားရော လို့ခင်ဗျားပြောချင်တာလား။
ကိုမူ။ ။ ဟုတ်တယ်၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆိုတာက ဆင်ခြင်မှုအခြေခံနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ ခံစားမှုနဲ့သွားတာကိုး။ ခေတ်မှီလာတဲ့ ရောထွေးစုပေါင်းလာတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ယူနီဘာဆယ်စံ အရ ညီမျှပြီး စည်းကမ်းဥပဒေတကျဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေရှိတယ်။ တဘက်မှာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလို၊ လွတ်လပ်ရေးလို၊ စစ်ပွဲနဲ့သမိုင်းတွေကို အတူဖြတ်သန်းရင်းရလာခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ ဂုဏ်ရောင် ထွန်းပြောင်မှုပေါ် အခြေခံထားတဲ့ စုစည်းမှုရှိတယ်။ ဒီနှစ်ခု မျက်နှာချင်းဆိုင်မိရင်း အကဲဆတ်လာကြတယ်။
ကိုလူ။ ။ အဲဒီတော့
ကိုမူ။ ။ အမျိုးသားနိုင်ငံတွေမှာဒီခြိမ်းခြောက်မှုကြီးလာတော့ အမျိုးသားရေးဝါဒကို လှမ်းဆွဲတော့တာပေါ့။
ကိုလူ။ ။ တည်ငြိမ်မှုကိုဗန်းပြပြီး အမျိုးသားရေးကိုရှေ့တန်းတင်လာတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလား။
ကိုမူ။ ။ ရှိနိုင်တာပါပဲ။ ရှိနေတာပါပဲ။ သို့သော်ကျနော်ပြောချင်တဲ့အပိုင်းက ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်စေ၊ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်စေ၊ မဖွံ့ဖြိုးသေးတာပဲဖြစ်စေ၊ ဒါဏ်ရာတမျိုးမျိုးရထားတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာသာ အမျိုးသားရေးဝါဒကို အတွေ့ရများတယ် ဆိုတာပါ။ ဘေးဖယ်ထုတ်ခံထားရတဲ့လူနည်းစုတွေဟာ သူတုိ့အသိမှတ်ပြုခံရဖို့၊ ပြန်လည်ရုန်းကန်ကြမှာအမှန်ပဲ။
ကိုလူ။ ။ ဖိတော့ရုန်း၊ ရုန်းတော့ဖိ၊ ဂျာအေးကိုသူ့ကြီးဒေါ်ကြီးကပါဝင်ရိုက်တယ်ဆိုပါတော့။
ကိုမူ။ ။ အမျိုးသားရေးဝါဒကရှို့ဖို့လွယ်တယ်။ ငြိမ်းဖို့ကျတော့အများကြီးခက်ပါတယ်။ မထိမ်းနိုင်ရင်လူမျိုးရေးသန့်စင်မှုနဲ့ လူမျိုးစုလိုက်မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်မှုတွေထိပါရောက်ခဲ့တာတွေမျက်မြင်ပဲမလား။
ကိုလူ။ ။ ဒီထောင်ချက်ကထွက်နိုင်တဲ့နည်းများ ခင်ဗျားဘုတ်အုပ်တွေထဲမတွေ့မိဘူးလား။
ကိုမူ။ ။ ဟာဘားမားပြောတာကတော့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနည်းလမ်းတကျဖြစ်တဲ့မျိုးချစ်ဝါဒ (Constitutional Patriotism) တဲ့။ အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာက Post-conventional Morality ကနေThe Conventional Morality ကိုပြန်သွားတာကိုး၊ သမိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနောက်ပြန်လှည့်တာကိုး၊ ဥပဒေနဲ့ထိန်းကျောင်းရမယ်။ ဒီမိုကရေစီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ပဲတည့်မတ်ရမယ်။ အဲသည်မှာအရေးကြီးတာက အခြေအနေအရပ်ရပ်နဲ့ပြေလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု ရှိနေဖို့လိုတယ်။
Posted by KZကေ at 18:57 No comments:
Moral Discourse အရဆက်စပ်ပတ်သက်နေသူအားလုံးလက်ခံနိုင်သည့်စံနှုန်းများလိုလာသည်။ Moral Discourse ကိုသုံးစွဲပြီးအရောက်သွားရမည့် Post-conventional Morality ၏အဆင့်ခြောက်တွင် ထိုစံနှုန်းများဖြင့် တရားမျှတမှု၊ညီမျှမှုတို့ဖြင့်လူသား၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားသိမှတ်မှုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ တဘက်တွင်မော်ဒန်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် ရှုပ်ထွေး၊ ကွဲပြား၊ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရောနှောလာပြီး ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ စံတခုတည်း ခေါင်မှ ထိန်းချုပ်ထားမှုမျိုးမရှိတော့။ ဒီအချက်တွေက မော်ဒန်လူသား၏ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်လောကအမြင် (Subjectivity) ကိုအခြားသူများနှင့်ညှိနှိုင်းရင်းဆုံးရှုံး ခံလိုက်ရမည်ဟုမဆိုလို၊ ကျယ်ပြန့်လာသည့်ကိုယ်ပိုင်အမြင် (larger self) တခုဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်သာဖြစ်သည်။ တွေးခေါ် မျှော်မြင်မှုပြည့်ဝသည့် စုပေါင်းအမြင်တခု (an idealized we-perspective) ထူထောင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟာဘားမား၏ ဆိုခဲ့ပါ အယူအဆသည် ဖီလော်ဆော်ဖီရှုထောင့်မှသည် နိုင်ငံရေးအမြင်တခုကိုရွေ့ပြောင်းလာခဲ့သည်။ တကယ်တမ်းဆိုလျှင် နိုင်ငံရေးနှင့်ဥပဒေကို ကိုယ်ကျင့်ရှုထောင့်မှ ခွာပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဟာဘားမားကနိုင်ငံရေးကိုအ၀န်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုခွဲပြောသည်။ စည်းတွင်းအ၀န်းအ၀ိုင်း (Formal Sphere) နှင့် စည်းပြင်အ၀န်းအ၀ိုင်း (Informal Sphere) ဖြစ်သည်။ စည်းပြင်ဝန်းဝိုင်းတွင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (Civil Society) ရှိသည်။ အစိုးအရမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မီဒီယာတို့သည် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲတွင်ပါသည်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သူတို့မဟုတ်။ သူတို့က နိုင်ငံ၏ ယေဘူယျပြဿနာများ၊ သီးခြားဖြစ်ရပ်များနှင့်ပါတ်သက်သည်တို့တွင်ဆွေးနွေး၊ နားလည်မှုယူ၊ အလျှော့အတင်းပြု၊ အယူအဆများစုစည်းတင်ပြကြသည်။ တဘက်တွင် ပါလီမန်၊ ၀န်ကြီးအဖွဲ့၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသောအဖွဲ့များ နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် စည်းတွင်းဝန်းဝိုင်း ထဲတွင်ရှိပြီး ပေါ်လစီချမှတ်သူများ၊ ဆုံးဖြတ်နိုင်သူများ၊ ဥပဒေပြုသူများ ဖြစ်သည်။ ဟာဘားမားအယူအဆအရ နိုင်ငံရေးစံနစ်တခုတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တွေးခေါ်ယူဆချက်၊ဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်ချက်များ စီးဝင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သော အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသည် အသွင်း (Input) တွင်အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လူထုအယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်များရှိပြီး အထွက် (Output) တွင် လူထုပေါ်လစီနှင့် ဥပဒေတို့ရှိရမည်။ ဒါကခေတ်မှီမော်ဒန်လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုအတွက် အပြိုင်သွားနေရမည့်နိုင်ငံရေးစည်းတွင်းစည်းပြင်အ၀န်းအ၀ိုင်း နှစ်ခုဖြစ်သည်။
ထုိ့အပြင် အခြေခံအတွေးအခေါ်ပိုင်းတွင်လည်း ဟာဘားမားသည် အစဉ်အလာ နိုင်ငံရေးအယူအဆ နှစ်ခုကိုမျှပြီးပုံဖော်ဖို့တင်ပြထားပြန်သည်။ ထိုနှစ်ခုမှာ Liberal Democracy နှင့် Civic Republican ဖြစ်သည်။
လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီမှာ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်တဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် (Individual Self-determination) ပေါ်အခြေခံသည်။ လူတဦးချင်းစီ၏စိတ်ခံစားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး လွတ်လပ်မှုကို အခွင့်အရေးအဖြစ် မြင်နိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ Freedom ကို Opportunity အဖြစ်ဆွဲယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရီပတ်ပလီကန်မှာ အချုပ်အချာခိုင်မာမှု၊ လူထုနှင့်နိုင်ငံရေးချုပ်ကိုင်မှု (Self-realization of the political community) ပေါ် အခြေခံသည်။ လူထု၏စုပေါင်းနိုင်ငံရေးချုပ်ကိုင်မှုဆိုသဖြင့် လူတဦးချင်းစီ၏လွတ်လပ်ခွင့် ကိုကန့်သတ်သည်။ လွတ်လပ်မှုကိုအလေ့အကျင့်အဖြစ်မြင်သည်။ Freedom ကို Exercise ဟုအနက်ဖွင့်သည်။
ဟာဘားမားကလူတဦးချင်းစီ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမထိပါးသည့်လူထုနိုင်ငံရေးအာဏာဖွင့်ဆိုလိုသူဖြစ်သည်။ ဒီမျှခြေကိုရှာလိုသဖြင့် ပါလီမန်၊ လွှတ်တော်စသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၏ဆုံးဖြတ်ခွင့်အတွင်း အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အယူအဆနှင့်အမြင်တို့ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားစေလိုခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် သြော်သို့သော်ဖြစ်သည်။ လူတဦးချင်းစီ၏လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုသည်မှာအမြဲလိုလိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် တွန်းထိုးလွန်ဆွဲရမှုများရှိသည်။ ဒီနှစ်ခုကြားတင်းမာများရှိသည်။ ဒါကိုဟာဘားမားကမငြင်း။ အဖြေက ဥပဒေကိုကြားခံထားပြီးဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်သည်။ ဥပဒေတရပ်သည်လိုက်နာရန်ကောင်းမွန်သည့်အချက်(Appreciable) ထင်ရှားရှိရမည်။ အသိအမှတ် ပြုခံရသည့်အဖွဲ့အစည်းတခုကချမှတ်ရမည် (Positive Effect)။ ဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့ တင်းမာသည့်တွန်းအား (Coercible) ရှိရမည်။ ထိုအချက်များထင်ရှားမရှိပါက ဥပဒေအရပြဋ္ဌန်းထားသည့်လူ့အခွင့်အရေးသည် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဈေးကွက်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တာရား၏ ခြစားမှုဒါဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်ခဲယဉ်းမည်။ တနည်းဆိုလျှင်အားနည်းသည့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရန်ပံ့ပိုးနိုင်စွမ်းရှိမည်မဟုတ်။ အကျိုးဆက်မှာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အာဏာပါဝါကိုတည်ဆောက်နိုင်သည့် အုပ်စုတခုကသာနိုင်ငံ၏ကံကြမ္မာကိုချယ်လှယ်ခွင့် ရပေလိမ့်မည်။
Posted by KZကေ at 20:46 No comments:
၁၅။ ဘာလင်တံတိုင်းအပြို နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်...
၁၄။ အမျိုးသားရေးဝါဒကိုလက်သပ်မွေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းေ...